चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीमा स्क्रीनशटहरू कसरी लिने आईफोन समाचार
चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीमा स्क्रीनशटहरू कसरी लिने
नयाँ एप्पल टिभीले हामीलाई आनन्दको घण्टा सुनिश्चित गर्दछ, मल्टिमेडिया सामग्रीको कारणले मात्र यसले हामीलाई खेल्न अनुमति दिँदैन, तर अनुप्रयोगहरू र खेलहरूका लागि पनि धन्यवाद छ जसले हामीलाई हाम्रो उपकरणमा सिधा स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। पनि सम्भावना को लागी धन्यवाद हाम्रो मनपर्ने खेलहरूको मजा लिनको लागि गेमप्याड थप्नुहोस् हाम्रो घरमा ठूलो स्क्रिनमा। कहिलेकाँही, जेसुकै कारणका लागि हामी त्यस चित्रको स्क्रीनशट लिनमा चासो लिन सक्छौं जुन त्यस क्षणमा देखाइएको छ।
आईफोन, आईप्याड वा आइपड टचको साथ क्याप्चर गर्नु भनेको सरल र एकै पल्ट घर र आराम बटन थिच्नु जत्तिकै सरल छ उपकरणको लागि एक सेकेन्डको लागि रिफ्लेक्स क्यामेराको शटरको आवाजसँग प्रतिक्रिया दिन। त्यस समयमा क्याप्चर गरीएको थियो र सिधा हाम्रो उपकरणको रिलमा सुरक्षित गरिएको छ। तर एप्पल टिभीमा, ती सबै भन्दा यो जटिल छ, किनकि हामीले एक्स-कोड वा द्रुतसमय अनुप्रयोगको सहारा लिनु पर्छ र यसलाई सफलतापूर्वक गर्न सक्षम हुनको लागि उपकरणलाई हाम्रो म्याकमा जडान गर्नुहोस्।
1 चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीमा क्याप्चर गर्ने
चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीमा क्याप्चर गर्ने
हामी म्याकमा Xcode स्थापना गर्छौं।
हामी एप्पल टिभीलाई USC-C को माध्यमबाट हाम्रो म्याकमा जडान गर्दछौं। यन्त्र म्याकमा जडित हुँदा यो HDMI जडान मार्फत पनि टेलिभिजनमा जडान हुनुपर्दछ।
हामी उपकरणहरूमा क्लिक गर्दछौं र एप्पल टिभी चयन गर्दछौं।
हामीले जडान गरेको उपकरणको प्रकारका बारे जानकारी सही स्तम्भमा प्रदर्शित हुनेछ, यस अवस्थामा चौथो जेनरेशन एप्पल टिभी। क्याप्चर गर्न, टेक स्क्रिनशटमा क्लिक गर्नुहोस् जब क्याप्चर गरिनु पर्ने सामग्री टिभी स्क्रिनमा देखाइन्छ।
हामी हाम्रो एप्पल टिभीलाई म्याकसँग जोड्दछौं।
हामी क्विकटाइम खोल्छौं र फाइल> नयाँ स्क्रिन रेकर्डि .मा जान्छौं।
हामी इनपुट उपकरणको रूपमा एप्पल टिभी चयन गर्दछौं।
हाल चलिरहेको एप्पल टिभीको सामग्री द्रुत टाईम स्क्रिनमा प्रदर्शित हुनेछ। अब हामी केवल म्याकको पूर्ण स्क्रिन क्याप्चर गर्न कमाण्ड + Alt +3मात्र थिच्नेछौं वा हाम्रो म्याकको स्क्रिनको आंशिक कब्जा लिन कमांड + Alt + 4
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » Apple TV » चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीमा स्क्रीनशटहरू कसरी लिने
न्यूरोनिक 08 भन्यो
कसरी एप्लेटv4 को कार्यक्षमता को समीक्षा?
मसँग समाधान गर्नका लागि धेरै शंकाहरू छन्, यो एक उत्तम उपकरणको जस्तो देखिन्छ
Plex, DLNA, NAS सर्भर को लागी समर्थन गर्नुहुन्छ?
डाटा प्रविष्टि प्रणाली, आवाज श्रुतिलेख, अन-स्क्रिन किबोर्ड, रिमोटमा टच इशाराहरू?
के बाह्य उपकरण, नियन्त्रक, किबोर्ड माउस आदि ...
तपाईं सामग्री प्ले गर्न एक पेनड्राइभ राख्न सक्नुहुन्छ
इन्टर्नेट स्मार्टफोनबाट एपलेटभमा सामग्री पठाउन सक्षम हुनु आवश्यक छ, कमबिन क्रोमकास्ट जस्तै जानुहोस् जुन तपाईं इन्टरनेट बिना छुट्टीमा लिन सक्नुहुन्न।
बाह्य हार्ड ड्राइभ आदि समर्थन गर्नुहोस् ...
Neuronic08 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते नउरोनिक ०08 त्यहाँ समीक्षा हुनेछ, तर मलाई लाग्छ कि केही बेर पर्खेर कम्तिमा एक हप्ता यो गर्नु राम्रो हो। तपाईंको शंकाको बारेमा, म तिनीहरू मध्ये केही खाली गर्न सक्छु:
- त्यहाँ कुनै ब्राउजर छैन, कम्तिमा यो क्षणको लागि। म वास्तवमै केहि देख्न चाहन्छु।
-प्लेक्स हुनेछ, विकासकर्ताहरूले भनेका छन्। मलाई थाहा छैन यो पहिले नै छ कि छैन।
- लेख्नको लागि, अहिले टाढाको कार्यहरू मात्र होईन आवाजबाट। त्यो हो, जब तपाईले संवाद बाकसमा लेख्नुपर्दछ, तपाईले सिरी रिमोट प्रयोग गर्नुपर्नेछ, अक्षरहरू खोज्दै त्यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। केहि अनुप्रयोगहरूमा, केवल एक पत्र राखी परिणाम देखा पर्नेछ।
- यो एक pendrive छैन। योसँग USB-C पोर्ट छ, तर मलाई शंका छ कि हामी त्यहाँबाट केहि गर्न सक्दछौं। जे भए पनि, यो प्रयास गर्नुपर्नेछ।
-राइट अब यसले केवल खेल कन्ट्रोलरहरू र सिरी रिमोट समर्थन गर्दछ, यदि मैले सहि सम्झना गर्दछु। समर्थन MFi नियन्त्रणहरू।
- यदि यसलाई इन्टरनेट चाहिन्छ वा छैन भने मलाई यो पक्का थाहा छैन, मैले यो प्रयास गरेको छैन र आज म यो जाँच गर्न सक्षम हुने छैन।
बाह्य हार्ड ड्राइभ, पेनड्राइभ जस्तै। मलाई शंका छ, तर हामीले यसलाई युएसबी-सीमा जोड्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ र के गर्छ हेर्नुहोस्, यदि यो "कम्प्युटरहरू" सेक्सनमा देखा पर्दछ (मलाई लाग्छ कि यो भनिन्छ, यो सुन्तला हो, तर मलाई अहिले नाम याद छैन। )।
लुमिनो शहर, तपाईंको आईफोनमा रोमांच र पजलहरू